Malunga nathi -Zhongshan Amor Isixhobo soMbane Co., Ltd.
Imodeli yeqhosha lokutyhala
Imodeli yokuthinta ulusu
Izitshisi ezininzi zokupheka
umpheki webhetri welanga
Iimveliso zokupheka ezintsha
I-FAQ yokupheka ye-infrared
Eyasungulwa ngo-2016, i-amor ngumenzi oqeqeshiweyo we-OEM / ODM kunye noMcebisi weMveliso nge-Innovation, kukunceda ufezekise injongo yakho, kwaye uya kunika abantu ngobomi bwanamhlanje ngeteknoloji entsha.
Ngexesha elifutshane lokukhula ube sisiqalo se-10 seedola sonyaka sentengiso, iseti yophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo kwelinye lamashishini okuthengisa ombane. Inkampani igubungela indawo emalunga ne-10000 yeemitha zesikwere, yakhe umzi-mveliso ofanayo, ukugqitywa kwemveliso yeeyunithi ezingama-5000, iimveliso ezivela ekuthengeni izinto ezingavunyelwanga, okanye inkqubo yokuvelisa imveliso kunye nokuvavanya ngokungqinelana nelizwe inkqubo yezatifikethi yomgangatho wamanye amazwe omiliselwa; Ngoku iimveliso zethu zithunyelwa eAsia, eAfrika, eYurophu naseMelika kunye nakumazwekazi kumazwe nakwimimandla,
I-Zhongshan Amor IsiXhobo soMbane soMbane Co, Ltd. ingene kwisivumelwano sokudibana neFoshan Shunde North Conductor Industry Co, Ltd. 20 yezigidi zeedola zentengiso yonyaka. Ukudityaniswa kwenzeka ngoJanuwari 1st, 2019 emva kweeyure zomsebenzi. Iindawo ezivulekileyo njengeFoshan Shunde North Conductor Industry Co, Ltd. Amasebe eShunde: - China shunde 2nd ring road 8, Wisdom building 6th Floor.
Isiteyitimenti sombono we-amor sisenza ukuba sikwazi ukuhambisa izisombululo "zohlobo olunye" eziqhuba impumelelo kunye nokukhula kwabathengi bethu-okudala amathuba okuthengisa amatsha anenzuzo kuthi nakumaqabane ethu. Siza kuthatha abathengi bethu kunye namaqabane ngaphaya kwemveliso nganye kunye namandla abo. Siza kukhuthaza izimvo ezintsha ezivela kwitekhnoloji:
I-Amor iguqula indlela imibutho ebandakanyeka ngayo ngolwazi kusetyenziswa itekhnoloji edibeneyo. Ngokubonelela ngephothifoliyo ebanzi yolawulo lwamaxwebhu aphumelele amabhaso kunye nezisombululo zokubonisa, i-Amor inceda amashishini ukuba enze, alawule, abone umbono kunye nokwabelana ngolwazi, esenza ukuba kuphononongwe izimvo kwaye basebenzisane ngeendlela ezintsha. Ukusuka kwi-Innovation eNtsha ukuya kwizisombululo zolawulo lwamaxwebhu, i-Amor yokwandisa uluhlu lweetekhnoloji zeofisi, iinkonzo kunye nenkxaso ziyilelwe ukwenza ulwazi ngakumbi ngokomxholo, ulwelo, olusebenzayo kwaye ekugqibeleni lufikeleleke ngakumbi, lukhuthaze izimvo ezivela kwitekhnoloji.
Kumgangatho we-6, iYunithi 3, Ukwakha i-6, iGaozaifuyuan, iXingtan Idolophu, iSithili saseShunde, iSixeko saseFoshan, China
Umahluko phakathi kwecooke yoqheliso ...
Ulwazi lokwahlulahlula umpheki
© Copyright - 2010-2023: Onke amalungelo agciniwe.